के भारतको बिजुलीले नै रोकिरहेको छ लोडसेडिङ ? हेर्नुस् तथ्यांक – Rapti Khabar
१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आलोचकहरुले लगाउने गरेको एउटा आरोप हो, भारतबाट बिजुली किनेर लोडसेडिङ हटाएको छ ।
घिसिङ अहिले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा रहँदा फेरि यो विषय बाहिर आइरहेको छ । के नेपालमा लोडसेडिङ हट्न भारतको बिजुली नै निर्णायक हो त ?
त्यसभन्दा अघिल्ला वर्ष नेपालमा बिजुली आयातको परिणाम क्रमशः बढ्दै थियो । तर, परिणाम बढ्दा पनि कूल खपतमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा ठूलो हुन पाएको थिएन । नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै लगेपछि गत आर्थिक वर्षबाट भारतीय बिजुली आयात दर नै कम भएको छ ।
गत वर्ष कूल खपतको २२ प्रतिशत बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्यो । जबकी त्यसभन्दा अघिल्ला दुवै वर्ष यहाँ खपत भएकोमध्ये ३७ प्रतिशत बिजुली भारतको थियो । आन्तरिकतर्फ नेपालमा खपत भएको बिजुलीको करिब ४० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुलीको हिस्सा थियो ।
त्यसैगरी नेपालमा निजी विद्युत उत्पादक आयोजनाहरुले ३८.६३ प्रतिशत बजार ओगटेका थिए । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट आउने बिजुली अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्ब ९ करोड युनिटले घटेको छ ।
भारतको पावर एक्सचेन्ज बजारमा आवद्ध हुन नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकेको छ । तर, भारतसँग यसबारे अन्तिम समझदारी हुन बाँकी छ । यो भारतको बिजुली बेच्ने खुला अनलाइन बजार हो, जहाँ आफूलाई बढी हुने बिजुली बोल कबोलमा मूल्य बढाएर बेच्न सकिन्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन अन्तर्गत नेपालले १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात गर्न सक्छ । हाल २५० मेगावाट मात्रै आयात भइरहेको छ । अनलाइनखबरबाट साभार